Saturday October 27, 2018 - 11:35:00 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa dib ushaqa billaabay maamulkii islaamiga ahaa ee deegaanka Daynuunaay ee duleedka magaalada Baydhabo gobolka Baay, isbuucii labaad ayay deegaankaas gacanta ku hayaan ciidamda Al Shabaab.
Sawir hore Ciidamada Al Shabaab oo sii gelaya Daynuunaay.
Dad ku sugan deegaanka Daynuunaay oo qiyaastii magaalada Baydhabo ujira 18Km ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ku dhaqanka shareecada islaamka dib looga hirgeliyay deegaanka muddo 6 sanadood ah kadib.
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Al Shabaab oo isbuucii lasoo dhaafay qabsaday deegaanka ayaa dadka u sheegay in uu dib usoo laabtay maamulkii islaamiga ahaa, ganacsatada ayaa lafaray in goobaha ganacsiga ay xiraan marka la aadaamo salaadaha faradka ah.
Sidoo kale dumarka ayaa loo sheegay in ay xirtaan Xijaabka sharciga ah, sidoo kale maamulka islaamiga deegaanka Daynuunaay ayaa mamnuucay isticmaalka nuucayada kala duwan ee Maandooriyaha iyo ka ganacsigiisa sida Sigaarka, Khaatka iyo Tubaakada.
"Isbuucii labaad oo xiriir ah waxaa nala jooga wadaadada jawiga deegaanka Daynuunaay waa mid aad uwanaagsan oo ammaan ah, waxaana dib usoo laabanaynaya maamulkii wilaayada islaamiga ah oo noogu dambeysay sanaddii 2012-ka aad baana ugu faraxsannahay in ardaasheeshii mooryaanta ahaa nagala dulqaday" sidaas waxaa yiri qof goob jooge ah.
Ciidamada Xabashida Itoobiya iyo maleeshiyaadka maamulka 'Koonfur Galbeed' ayaa deegaanka isaga baxay todobaad ka hor kadib weerar gaadma ah oo ay xoogaga Al Shabaab ku qaadeen xilli aroor ah.
Haysashada Al Shabaab ee deegaanka Daynuunaay ayaa waxba kama jiraan ka dhigeysa haysashada ciidamada Xabashida Itoobiya ee magaalada Buurhakaba oo qiyaastii 60 KM ujirta magaalada Baydhabo.
Mas'uuliyiinta DF-ka iyo shaqaalaha maamulka Shariif Sakiin madaxda ka yahay ma isticmaali karaan wadada laamiga ah ee xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo waxa kaliya ee furan ayaa ah hawada iyagoo maciin biday isticmaalka diyaarado qarash badan uga baxo.